I maka azy, dia, Izany tsy finoana an i Jesosy — Trip LEE - OFISIALY SITE
I haka azy, avy eo, fa ny tsy finoana an 'i Jesoa (TSY mino an'i Jesosy) dia ny miala amin'ny an'i Jesosy mba hitady afa-po amin'ny zavatra hafa. Sy ny finoana an'i Jesosy avy amin'i Jesosy noho ny fahafaham-po ny zavatra ilaintsika sy ny faniriana.
Ny finoana dia tsy tena fifanarahana miaraka amin'ny zava-misy teo amin'ny lohany; dia tena ny fahazotoan-komana ao am-po, izay fastens amin'ny an'i Jesosy noho ny fahafaham-po. [hoy i Jesosy,] 'Izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy dia tsy hangetaheta mandrakizay!'